SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Mamiriyoni ebhuku rinonzi Shingairira Kuverenga Nokunyora akagadzirwa kuti abatsire vanhu kudzidza kuverenga nekunyora uye anowanikwa mumitauro inopfuura 100
“Munhu wese ane kodzero yekuti adzidze kuverenga nekunyora, uye izvi zvinomubatsira muupenyu.”—UNESCO. *
ONGORORO yakaitwa inoratidza kuti pasi rose vanhu vanopfuura 700 miriyoni vane makore 15 zvichikwira havagoni kuverenga nekunyora. Izvi zvinoita kuti vatadze kuwana ruzivo runobatsira muupenyu runosanganisira zvinhu zvatinodzidziswa naMwari zvakanyorwa muBhaibheri. (VaRoma 15:4) Saka mune dzimwe nyika Zvapupu zvaJehovha pazvinenge zvichidzidzisa vanhu Bhaibheri zvinovadzidzisawo kuverenga nekunyora zvisingavabhadharisi. Zvavari kuita izvi zvine zvazviri kubatsira here?
Chimbofunga nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha kuMexico, iyo ine vanhu vakawanda vanotaura chiSpanish. Kubvira muna 1946, Zvapupu zvakadzidzisa vanhu vanopfuura 152 000 kuverenga nekunyora uye vazhinji vavo vakapedzisira vava kudzidzisawo vamwe. Hurumende yeko yakanyorera Zvapupu tsamba dzekutenda basa ravari kuita. Imwe tsamba yacho yaiti: “Bazi Redzidzo rinokutendai nebasa ramuri kuita pakubatsira vanhu vakura kuverenga nekunyora.”
Vakuru nevadiki vari kubatsirwa neurongwa uhwu hwekudzidza kuverenga nekunyora. Semuenzaniso, vamwe ambuya vanonzi Josefina vakanga vava nemakore 101 pavakatanga kudzidza uye vakapedza pashure pemakore maviri!
Kunyange zvazvo kuMexico vakawanda vachitaura chiSpanish, hausi iwo wega mutauro unodzidziswa vanhu kuverenga nekunyora. Mugore ra2013, zvidzidzo izvi zvakaitwawo mumitauro 8 yekuMexico.
Kugona kuverenga nekunyora kunokosha uye kunobatsira pakudzidza zvinhu zvitsva. Chinonyanya kukosha ndechekuti kunobatsira vanhu vemarudzi akasiyana-siyana kuti vaverenge Shoko raMwari, Bhaibheri, iro rinogona kuvasunungura pakutenda mashura, padzidziso dzenhema, uye pazvinhu zvakaipa.—Johani 8:32.
^ ndima 2 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
AKASHAMISA VANHU VEKUMBA KWAVO
Daniel akadzidza mutauro wemasaini wekuMexico achishandisa maDVD
Daniel imatsi uye ainetseka nekuudza vanhu zvaanenge achida. Saka aiwanzoitira vanhu vekumba kwavo hasha uye aivatuka. Daniel paakanga ava nemakore 23, chimwe Chapupu matsi chainzi Josué chakatanga kudzidza naye Bhaibheri. Vakatanga vachiita zvekudhirowa. Uye vakazoshandisa maDVD, kuti vabatsire Daniel kuti agone mutauro wemasaini wekuMexico. *
Daniel paairamba achidzidza Bhaibheri akatanga kuva ‘neunhu hutsva’ hwakadai ‘setsitsi, mutsa, pfungwa dzinozvininipisa, unyoro, nomwoyo murefu.’ (VaKorose 3:10, 12) Daniel akatanga kushandisawo zvinotaurwa neBhaibheri panyaya yekuteerera vabereki nekuvakudza. (VaEfeso 6:1, 2) Akashamisa vanhu vekumba kwavo! Amai vake vakayangarara misodzi pavaitenda Josué nekudzidzisa mwana wavo Bhaibheri. Muna 2007, Daniel akabhabhatidzwa kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 12 Zvapupu zvaJehovha zvine mabhuku 46 emutauro wemasaini wekuMexico anowanikwa pamaDVD. Tine mabhuku anowanikwa mumitauro 80 yemasaini panzvimbo yedu yepaIndaneti yejw.org. Tinewo mabhuku eBraille kuitira vasingaoni.